Sein Lyan - စိ န် လျှံ: June 2010
ယနေ့ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၂)ခု ပထမဝါဆိုလဆုတ် (၂)ရက် ၊ (၂၀၁၀) ခု ဇွန် (၂၈)ရက်၊တနလာင်္နေ့ မနက်ခင်း ဘလောဂါ အတင်း (သည်းခံပါခင်ဗျာ) များကို စတင် …. ကြေငြာပါတော့မည်ခင်ဗျာ..။
တနင်္ဂနွေနံနှင့်စသော နာမည်ကြီး ဘလောဂါ ကဗျာဆရာမ အိမ်အပြောင်းအရွေ့ပြုခြင်း..
ဗုဒ္ဒဟူး နံနှင့်စသော နာမည်ကြီးဘလောဂါ အကို စကာင်္ပူသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည့် သတင်း..
ဘရက်ဒယ် မိသားစုဝင်များ တပတ်အတွင်း အိမ်သော့ခတ်ထားခဲ့ရခြင်း …
ပြီးခဲ့သော စနေနေ့တွင် တနင်္ဂနွေ နံနှင့်စသော နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာမက ဗေဒင်၊နက္ခတ်များအရ အပြောင်းအရွေ့ ပြုလျှင်ကြီးပွားတိုးတက်ပြီး နာမည်ကျော်ကြားမည်ဟု ဗေဒင်ဆရာဟောကြားကြောင့် နေ့သင့်၊ နံသင့် အချိန်သင့်သော ညနေနေမဝင်မှီ အချိန်တွင် အိမ်အပြောင်းအရွေ့များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တိကျသေချာသော ဗေဒင်အလိုအရ မိန်းခလေး တစ်ဦးနှင့် ယောကျားလေး နှစ်ဦး(အပျို၊လူပျိုများသာ ဖြစ်ရမည်) ဆိုသဖြင့် နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါ သုံးဦး အိမ်ဝိုင်းပြောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အတွက် ကဗျာဆရာမမှ စတင်းပုတ်ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်းကို အိမ်ရှင်များကို အားမနာတမ်း အကြိမ်တစ်ထောင်မက ကိုယ်တိုင်ကြွားဝါ ပြောခဲ့ပါသည်။ နာမည်ကြီးသည်နှင့် အညီ အိမ်ပြောင်းမည် ဆိုသည့်အကြောင်းကို မည်သူ မည်ဝါမှ မသိလိုသဖြင့် တိုးတိုး တိတ်တိတ် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ည (၁၁)နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ကဗျာ ဆရာမ အိမ်ပြောင်းရာ အခန်းသို့ ပရိတ်သတ်များ အုံ့အုံ့ကြွက်ကြွက် ပျားပန်းခတ်မျှ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ရောက်လာသော ပရိတ်သတ်များမှာ ကြပိုးများဖြစ်ပြီး ကဗျာဆရာမမှ မေတ္တာပို့ .. သတ် (သည်းခံပါခင်ဗျာ) မေတ္တာပို့သ နေရကြောင်းကို သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျာ…။
ဘလော့လောကတွင် မအိမ်ကံကို ကန်ထရိုက်ယူပြီး ဘလောဂါများကို အင်တာဗြူးခြင်းဖြင့် ပိုစ့်များစွာ ဖန်တီးနေသော ဗုဒ္ဒဟူးနံနှင့်စသော နံမည်သုံးလုံး နာမည်ကြီးဘလော့ဂါ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်း နှစ်လအတွင်း သတင်းများကို ရယူပြီး သကာလ ဇွန်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း စကာင်္ပူနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ကန်ထရိုက်ယူထားသော မအိမ်ကံကို ပြန်လည် တင်ဆက်မည့်အကြောင်း၊ ဘလော့ဂါများနှင့် အင်တာဗြူးခြင်းကိုလည်းအကြံအဖန် ပြန်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်ဒိုင်္နီးရှားရောက် လူပျိုတစ်ယောက်၏ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ကြုံသလို ရေးသားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်၊ အတင်းချခွင့် မူပိုင်ရထားသူ တစ်ဦးမှ ဘရယ်ဒယ် သတင်းငှာနသို့ ပြောကြားသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျာ…။
ဘလော့လောကတွင် ရက်အတန်ကြာ ဘလော့ပိတ်ပြီး ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားသော ဗုဒ္ဒဟူးနံနှင့်စပြီး အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ များဖြင့် ဆုံးသော မိန်းခလေးပရိတ်သတ်များသည့် ဘလော့ဂါ အကိုကြီးတစ်ယောက် ရုတ်တရက် စာပြန်ရေး၊ ဘလော့ပြန်ဖွင့်ခြင်းအပေါ် ဘလော့ဝေဖန်ရေးသုသေတီများက စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ရုတ်တရက် ပြန်ပေါ်လာပြီး စာများရေးသားနေခြင်းအပေါ် သဘောကျလှသော်လည်း ပိုစ့်များ နေ့စဉ်လိုလို တက်နေခြင်းအပေါ် သကာင်္မကင်း ဖြစ်နေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ရေးသားထားသော ပိုစ့်များ ကုန်ပြီးသကာလ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်အတွင်း ဘလော့ပြန်ပိတ်ပြီး ပိုစ့်များ ဖျက်ပစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေသော ဘလော့စာဖတ်သူအများအပြား ရှိနေသည့်အတွက် ထိုသံသယကိုရှင်းရန် ဘလော့ဂါအကိုကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ဘလော့ မပိတ်တော့ပါဘူး ကတိကဝတ် တောင်းလိုသူများ ရှိကြောင်းကို ဘလော့ဝေဖန်ရေး သုသေတီများမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးမှ အကြံပေး ပြောကြားသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျာ…။
မိန်းမကြောက်ရသဖြင့် (သည်းခံပါခင်ဗျာ) မိန်းမရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ဘလော့လောကမှ ခေတ္တ ခဏ အနားယူထားသော သောကြာနံနှင့်စသည့် င်္ခြသေ့နာမည်ခံ ဘလော့ဂါအကိုကြီးမှ မိသားစု ကျန်းကျန်းမာမာရှိကြောင်း၊ မိန်းမပြန်လျှင် စာပြန်ရေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မိန်းမပြန်ရန် ကြိုးစား အားထုတ်နေကြောင်း (သည်းခံပါခင်ဗျာ) မိန်းမပြန်လျှင် ပိုက်ဆံများများထည့်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြောင်း ဘရက်ဒယ် သတင်းငှာနသို့ ရယ်ရယ်မောမော ပါးရိုက်ပြောသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျာ...။
အေ တူ ဇက် ပိုစ့်ကို အများနှင့် မတူ တမူ ထူးခြားအောင် ခွင့်တလယူပြီး အပတ်တကုတ် ကြိုးစားအားထုတ်ရေးနေသည့် ကြာသာပတေးနာမ်နှင့်စသော နာမည်ကြီးလူပျိုကြီး ဘလော့ဂါမှ လာမည့်လအတွင်း ခွင့်ရက်စေ့သဖြင့် အလုပ်ပြန်ဝင်ရတော့မည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ အေ တူဇက်ကို တမူထူးခြားအောင် ရှု့ထောင့်တခုမှ တင်ဆက်မည့် လူပျိုကြီးသည် ခွင့်ရက်စေ့သော်လည်း အေ တူ အီး အထိသာ ပြီးသေးသည့် အကြောင်းကို ဘရက်ဒယ်အတင်းငှာနသို့ မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ ရှက်ဖွယ်စွာ ပြောကြားသွားပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျေးဇူးတရားကို တန်ဖိုးထားသည် နှင့် အညီ အေတူအီး အထိ ရေးသားနိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ dictionary များ၊ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ အထောက်အကူပြု ဝက်ဆိုဒ်များ နှင့်အတူ တိုပါးရိုး ဘုန်ကြီးကျောင်းမှ အေတူဇက်ပိုစ့်အတွက် အကောက်အကူပြု စာအုပ်ငှားပေးသည့် ကပ္ပိယ ကိုတီကိုလဲ ကျေးဇူးအမွှန်းတင် ကြောင်း ကျေးဇူးစကားများ မိုးမွှန်အောင် ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်းကို သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျား။
ယခုအပတ်အတွင်း စနေတနင်္ဂနွေ လူအမြဲစည်ကားသော ဘရက်ဒယ် အိမ်ကြီး သော့ခတ်ထားခြင်းခံရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အားလပ်ရက်တွင်း အချိန်အလဟသ မဖြစ်စေခြင်းအလို့ငှာ စနေသမီး စီးပွားရေးသုတေသီ၊ ရှာဖွေချွေတာစုဆောင်းရေး ပညာရှင် ဘလောဂါ ညီမမှ ဘရက်ဒယ် မိသားစုဝင်အားလုံးအား အပိုဝင်ငွေရရန် ရုံးချိန်လွတ် အလုပ်ကိုယ်စီ ရှာပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဘရယ်ဒယ် မိသားစုဝင် များမှာ နှစ်ယောက်တဖွဲ့ဖြင့် BOONLAY (MRT) နှင့် SENGKANG (MRT) အဝင်အထွက်များတွင် SINGTEL မှ ပေးသော အကျီအနီများကိုဝတ်ပြီး လက်ကမ်းစာစောင်များကို အလှည့်ကျ ကမ်းပြီး စီးပွားရေး သောင်းကျန်နေကြောင်း ၊နောင်အပတ်များတွင်လည်း အလှည့်ကျရာ MRT များတွင် လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေငှသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ထိုကြောင့် MRT အနီးတဝိုက်အတွင်း SINGTEL အကျီအနီကို ဝတ်ပြီး လက်ကမ်းစာစောင်များဝေငှ နေလျှင် ဘရက်ဒယ်မိသားစုဝင်များ ဖြစ်ပြီး ထိုစာစောင်များကို အားမနာတမ်း လိုသလောက်လာရောက်တောင်းယူ နိုင်ကြောင်း၊ ဘရက်ဒယ်မိသားစု နှင့်အတူ လာရောက် အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သတင်းတရပ် ရရှိပါသည်ခင်ဗျာ။ ယနေ့တွင်မူ ဘရယ်ဒယ်မိသားစု များအား နာမည်ကြီးဘလော့ဂါများ၊ ဓာတ်ပုံဆရာများမှ လာရောက် အားပေးကြည့်ရှု့ပြီး ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ယူသွားကြောင်း၊ အတင်း (သည်းခံပါခင်ဗျာ) သတင်းများကိုပြန်လည်ဝေငှမည်မှာ ယုံကြည်ကြောင်းကိုလည်း ဘရက်ဒယ် မိသားစုတစ်ဦးမှ ပြော ကြားလိုက်ပါသည်။ စက်ရပ်သတင်း အနေနှင့် ဘရက်ဒယ်မိသားစုဝင်များ အလုပ်အကြောင်းပြ ရရှိလာမည့်ငွေကို မျှော်မှန်းပြီး နားဖောက်ခြင်း၊ အိတ်ဝယ်ခြင်း၊ အဝတ်အစားဝယ်ခြင်းများ၊ အသုံးအဆောင် အလှပြင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း ပြုလုပ်ကြောင်း၊ ပင်ပန်းသည်ဟု အကြောင်းပြပြီး စားသောက်ဆိုင်တွင် အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်ရင်း တနင့်တပိုး စားသောက်ကြနေသောကြောင့် ချွေတာစုဆောင်းရေး ပညာရှင် ညီမ ဘလောဂါမှ ပရိတ်ရွတ်နေကြောင်းကိုလဲ သတင်းရရှိပါသည်ခင်ဗျား။
ဤတွင် ဘလော့ဂါ အတင်း (သည်းခံပါခင်ဗျာ) သတင်းများကို ကြေငြာလို့ ပြီးပါပြီ။ ကိုယ်စိတ်နှဖြာ ကျမ်းမာ ချမ်းသာတော်မူစပါစေခင်ဗျာ။
သတင်းကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်သူမှာ ကြေငြာသူ အသစ်ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်သက် မရင့်ကျက်သေးခြင်းအပေါ် သည်းခံပေးပါရန်နှင့် သည်းခံပါခင်ဗျာဟု တောင်းပန်ခြင်းကို အသာတကြည်လက်ခံပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဘလော့ဂါသတင်းများကို ရယူလိုခြင်း၊ ဖြန့်ဝေ အသိပေးလိုခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းများရှိပါက ဘရက်ဒယ် သတင်းငှာနသို့ လူကိုယ်တိုင် အစားအသောက်များဝယ်ပြီး အိမ်လာလျှင်ဖြစ်စေ၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်တွင် ချိန်းပြီး သတင်းပေးလျှင်ဖြစ်စေ သတင်းများကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
BLD GOSSIP & NEWS DEPAREMENT
01 @2345, BLK 005, SINGAPORE
Writer Sein Lyan Time 8:18 pm 13 comments: Links to this post
ခုတလော တော်တော်လေးကို ဝလာတယ်။ ဗိုက်က အစပေါ့။ တွေ့တဲ့သူတိုင်းက ဝလာလိုက်တာ ဖြူလာ ချောလာ လိုက်တာ မပြောကြဘူး။ ဗိုက်လေးက ပူလာတယ်ပဲ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆိုက်ကို ဝင်နေတယ်ပြောရမလား။ သတိရတိုင်း ဗိုက်လှန်ကြည့်နေမိတယ်။ မနက်စာ လုံးဝမစားပါဘူး။ ညနေ (၆) နာရီ နောက်ပိုင်းကနေ မနက် (၆) နာရီထိပဲ စားတာပါ။ သေချာတာက ဝလာတယ်။ တကယ်ကို ဝလာပါတယ်။ အသည်းယားလို့ ဆိုပြီး ဗိုက်ကိုလာကိုင်တဲ့သူနဲ့ လက်မောင်းလာကိုင်တဲ့သူနဲ့.. တော်သေးတာက သူတို့ မြင်တာပဲ သူတို့ ကိုင်ကြတာကိုး... တော်ကြာ အသည်းယားစရာတွေ မြင်ပြီး ကိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တော့ သွားပြီး...။
ညည ဆိုမအိပ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါတယ်။ သရဲကား၊ စုံထောက်ကား၊ လူသတ်ကား၊ ဟာသကား၊ တခါတလေ အာဟာရ ကား။ စုံလို့ပါပဲ။ မိုးမလင်းမချင်းကြည့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ အခု လုပ်ရမယ့် ပရောဂျက် အတွက် အာရုံယူတယ်လို့ မှတ်ပါတယ်။ မယုံချင်နေပါ။
ခုတလော တကယ်ကို မအားလပ်တဲ့ ပရောဂျက်တွေနဲ့ ပိနေပါတယ်။ ပရောဂျက်အတွက် research လုပ်ရင်း Youtube ကိုသွား သီချင်းနားထောင် ဖြစ်သွားတာက များနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် တကယ်ကို မအားဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စာမရေးနိုင်တာပါ။ ခုချိန်စာရေးရင်လည်း ကိုယ်ဆီက ကောင်းကောင်းခန်းခန်းထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကလည်း ကောင်းတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ စာမရေးတော့ဘူးလား လို့ မေးတဲ့ စာဖတ်သူ တချို့အတွက်ပါ။
City Hall မှာ ဆိုင်ခန်းဖွင့် ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကို မုန်းပါတယ်။ (အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါ ကိုယ်ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့သူတချို့) ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဆီ ဈေးလာဝယ်တဲ့သူတွေကို ချိုချိုသာသာ မဆက်ဆံသလိုပါပဲ။ ကိုယ်ကပဲ ပိုနေတာလား သူတို့ကပဲ လိုနေတာလား မသိဘူး။ သူငယ်ချင်းအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် စုံစမ်းတော့ နှစ်ခွန်းလောက်ပဲ မေးရသေးတယ် စိတ်မရှည်ချင်တော့ပါဘူး။ မျက်နှာပျက်လာတယ်။ စိတ်တွေဆိုးလာတယ်။ ဘာသဘောမှန်းမသိပါဘူး။ ဈေးဝယ်တယ်။ ငှက်ပျောပင်။ မုန့်ဟင်းခါးချက်ဖို့ပါ။ ငှက်ပျောပင်တွေ မကောင်းလို့ ပတ်ရှာဝယ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမရတဲ့ အဆုံး နည်းနည်းလတ်တဲ့ဆိုင်မှာ ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လဲ ဈေးမေးတော့ ၁ ကျပ်တန်ရှိတယ် ၁ ကျပ်ခွဲတန်ရှိတယ် မောင်လေးယူရင် လျှော့ပေးမယ်ဆိုတော့ လတ်တဲ့ နှစ်ခုကိုရွေးယူပါတယ်။ ယူပြီး ဘယ်လောက်လဲမေးတော့ မောင်လေးရယ် (၃) ကျပ်ပဲပေးသွားတဲ့။ အဲဒါလျှော့တယ်တဲ့လား။ (၁၀)တန်ပေးတော့ အကြွေးနှစ်ကျပ် အမ်းစရာ မရှိလို့ နောက်ထပ် နှစ်ကျပ်ဖိုး ထပ်ယူပါတဲ့။ လူတွေကို ရောင်းမကုန်တဲ့ ငှက်ပျောအူအပုတ်တွေ ထိုးပေးနေတယ်။ လူကိုဝက်ထင်နေသလားပဲ။ အဲဒီအချိန် ဆိုင်ရှင်က ကျနော်မျက်နှာ မြင်ပြီး နှစ်ကျပ်ကို မရမက ရှာအမ်းပေးပါတယ်။ အားနာပြီးတော့ နှစ်ကျပ်ဖိုး ထပ်ယူမယ့် သူမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်ထပ်မှာ ကြာဆံချက်ဝယ်စားပါတယ်။ ဝင်းမြန်မာမှာပါ။ စာကပ်ထားပါတယ်။ အဆင်မပြေမှု မကျေနပ်မှု ရှိရင်ပြောပါ ဘာညာ နဲ့ပေါ့။ ကျနော်စားချင်တာ ကြာဆံချက်ပါ။ ကြွက်နားရွက်မှို ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကြွက်နားရွက်မှိုတွေနဲ့ ပြွတ်သိပ်နေတဲ့ ကြာဆံချက်ကို သွားပြန်လဲတဲ့အခါ လဲပေးတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပွစိပွစိ ပါးစပ်တွေကြား အဲဒီကြာဇံချက်ကို ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီမှာ ထမင်းစားတော့ အော်ဒါမှာပြီး တနာရီ နီးပါးမျှ စောင့်နေရပါတယ်။ စိတ်မရှည်လို့ လှမ်းခေါ်တော့ အပြေးလေး လာပြီး ငွေရှင်းစာရွက်လာပေးပါတယ်။ မှာထားတာမလာသေးဘူး ဆိုမှ ဆောရီးပါတဲ့။ ကဲ.... ကျနော်ပဲ ဒေါသကြီးလွန်းနေတာလား။ သူတို့ကပဲ မှားနေတာလား ကျနော်ကတယ်မသိတော့ပါဘူး။
ခုတလော အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လဲ မထွက်ပါဘူး။ အပြင်ထွက်ရင် ဒေါသပါပါလာလွန်းလို့ပါ။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေရဲ့ အစအနောက်ကို ခံရင်း ကျနော်က ပြန်အော်ရင်း ပျော်နေပါတယ်။ လူဆိုတာကလဲ ခက်သား။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကျ ဘာပြောပြော အကုန်သဘောခွေ့နေတယ်။ ကိုယ် မချစ် မနှစ်သက်တဲ့သူကျ ကိုယ့်ကို ပြုံးပြရင်တောင် ကိုယ့်က လှောင်ပြုံးလို့ ထင်လိုထင်။ နေကောင်းလားလို့ မေးရင်တောင် ငါ့ကို သေစေချင်နေတာလားလို့ မြင်လိုမြင်နဲ့။ ချစ်တဲ့သူကျ ခြေဖဝါးလေးနမ်းရ နမ်းရ... ခြေမှုန့်လေးပဲ ရှူရ ရှူရ...
ဘရက်ဒယ် အိမ်က မောင်နှမတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပျောက်နေကြတယ်။ စာမရေးကြဘူး။ ဟုတ်တယ်။ ရှိသမျှ ကျားတွေက အခန်းထဲမှ စုစုပြီး နေမအား ညမနား ဒိုတာ ဆိုတာ ခုတ်ကြတယ်။ ခုဘောလုံးရာသီ စတော့ ပိုဆိုးတယ်။ သောကြာ စနေ ညတွေမှာ ညလုံးပေါက် ကစားလိုက် ဘောလုံးပွဲ ကြည့်လိုက်။ နေ့ဘက် တနေကုန်အိပ်လိုက် နိုးလာရင်စားလိုက်နဲ့။ မိန်းခလေးတွေကတော့ မေးမနေနဲ့။ ကိုးရီးယား ရာသီထနေကြတယ်ပေါ့။ သူတို့တွေ ကိုးရီးယား ကြည့်ပြီးရင် ဘယ်သူက ဘယ်မင်းသားနဲ့ တူတယ်။ ဘယ်သူကတော့ ပိုချောတယ်ပေါ့။ ကျနော်မသိတဲ့ နာမည်တွေ ရိမ်းနဲ့ တူတဲ့သူနဲ့ လက်ဝှေ့မင်းသားနဲ့ တူတဲ့သူနဲ့ ထယ်ဆောက်တို့ လီဗျောင်ဟွန်းတို့နဲ့ တူတဲ့သူနဲ့။ ကျနော်လဲ အားကျမခံ ကျနော်ရော ဘာသူနဲ့ တူသလဲမေးတော့ အားလုံးက အားရပါးရ ဝိုင်းပြပါတယ်။ ကားတိုင်းမှာ ဗီလိန်လုပ်နေတဲ့ လူကြမ်းနဲ့ တူပါတယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ အော် ကျနော်လဲ တခါတလေတော့ တူကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဝူခုံးနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောကျားလေး ဖြစ်နေတော့လဲ ရူပါလန်း ချင်တာပေါ့။ ဒါမှ စော်ကြည်မှာ ဆိုတော့ကာ....။
တနင်္ဂနွေ ညနဲ့ တနလာင်္နေ့ကို မုန်းပြီး သောကြာ စနေ တနင်္ဂနွေကို ချစ်နေပါတယ်။ တက်နေတဲ့ ကျောင်းကို မုန်းပြီး လုပ်နေရတဲ့ ပရောဂျက်တွေကို ချစ်နေပါတယ်။ အနားက မောင်နှမတွေကို ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်နေပြီး..... ပြီး... ဆက်ပြောရင် ရိုက်ပေါက်မို့.... ပြောတော့ဘူး။
ခုဒီပိုစ့်ရေးတာက တအိမ်ထဲနေပြီး ပိုစ့်တပုဒ်နဲ့ ကျော်တက်သွားတဲ့ ပြောရဦးမယ်... သိလား... ကို မခံချင်တာနဲ့ ချရေးမိတာပါလေ။ သူက ကိုးရီးယားကားတွေကြည့်ပြီး အနု အရွ စကားလုံးတွေကို ဖန်တီးနိုင်သေးတာပဲ။ ကျနော်က ဘာလို့ မလိုက်နိုင်ရမှာလဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဟို အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ပျင်းလွန်းလို့ လူပျင်းပိုစ့် ရေးတဲ့သူထက်တော့ သာပါသေးတယ်။ အလုပ်တစ်လနားပြီး အေ တူ ဇက် ကို Dictionary အုပ်ပေါင်းများစွာကို လှန်လှော ရေးနေတဲ့ မိုးကုတ်သားထက်လဲ သာအောင် ရေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုစ့်ရေးစရာမရှိလို့ ကြားဖူးသမျှ မြို့တွေကို မတောက်တခေါက်လေး ရေးတာထက်လဲ သာတယ်။ မီးအနံ့ ရမှ စာရေးတဲ့သူထက်လဲ သာတယ်။ သီချင်းတွေကြီးလွှတ်တင်ပြီး တလမှတခေါက် မတောက်တခေါက်ရေးတဲ့ လူအအိမ်မက်ထက်လဲ သာပါတယ်။ ကဗျာရေးပြီး ကောမန့် မဖွင့်ရဲတဲ့ ကိုဗလပိန်ထက်လဲ သာတယ်။ ကျနော် သာပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောချင်တာပါပဲ။
Writer Sein Lyan Time 7:09 pm 16 comments: Links to this post
တခါတုန်းက မိန်းခလေးတယောက်က တောထဲမှာ ထင်းကောက်သွားရင်း အနာတရ ဗလပွနဲ့ အေးခဲပြီး သေခါနီး မြွေတစ်ကောင်ကို တွေ့တယ်။ အဲဒီမြွေဟာ မြွေတွေထဲမှာ အဆိပ်အပြင်းဆုံး မြွေမျိုး ဖြစ်တယ်။ မိန်းမ ဖြစ်တဲ့အလျှောက် သနားစိတ် ပိုပြီး မြွေကို ဆေးကုသဖို့ အိမ်ကို ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ တနေ့ပြီး တနေ့ မြွေက နေပြန်ကောင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်ခလေးဟာ သူ ကုသခဲ့လို့ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ သံယောဇဉ် စိတ်နဲ့ မြွေကို ပြန်မလွှတ်ပဲ အိမ်မှာ ထားထားခဲ့တယ်။
တနေ့တော့ မြွေက မိန်းခလေးရဲ့ ချက်ကို ကိုက်လိုက်တယ်။ မြွေကိုက် ဒဏ်ရာကြောင့် မိန်းမောစွာ ခံစားနေရတဲ့ မိန်းခလေးက မြွေကို " နင့်အသက်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့ ငါ့ကို ဘာကြောင့် ပြန်ကိုက်ရသလဲ” လို့မေးတော့ မြွေက “ဟဲ့ စုန်းမ… ငါက မြွေတကောင်ဆိုတာ နင်သိရက်သားနဲ့” လို့ ပြုံးပြုံးကြီး ပြန်ဖြေတယ်တဲ့။ ပုံပြင်လေးကတော့ တိုတိုလေးပါ။
"လောကမှာ ကူညီသင့်တဲ့သူရှိတယ်။ မကူညီသင့်တဲ့သူ ရှိတယ်။ ကူညီတိုင်း မကောင်းတဲ့သူရှိတယ်။ ကူညီလို့ ကောင်းသွားတဲ့သူရှိတယ်။ အကူအညီကို လိုလိုလားလား လက်ခံတဲ့သူရှိတယ်။ အကူအညီကို မလိုအပ်တဲ့သူရှိတယ်။ ကူညီလိုက်လို့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတဲ့သူနဲ့ ကူညီပေးလိုက်ကာမှ ပိုဆိုးသွားတဲ့ အနေအထားရှိပြန်တယ်။
စိတ်မပါပဲ ကူညီလိုက်ရတာရှိသလို ကူညီဖို့ စိတ်ပါပေမယ့် မကူညီလိုက်ရတာမျိုး ရှိမယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကူညီပြီးတဲ့နောက် စိတ်ထားတတ်ဖို့ နဲ့ နေတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
အရာရာတိုင်း တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိချင်မှ ရှိမယ်။ သက်ရောက်မှုတိုင်းက ပစ်မှတ်တခုဆီက နေပဲ လာရမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘယ်နေရာကပဲလာလာ သက်ရောက်မှုကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။ လက်ခံတတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့" ဖေဖေက ပုံပြင်ကို ပြောပြပြီး ဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေဖေဘာကို အဓိက ထားပြီး ဆိုလိုချင်တာလည်း ဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့…..
Writer Sein Lyan Time 10:22 am 13 comments: Links to this post
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, ခံစားချက်သက်သက်, အဖေပြောသောပုံပြင်များ
Writer Sein Lyan Time 9:15 pm 11 comments: Links to this post
Writer Sein Lyan Time 11:50 am 41 comments: Links to this post